ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ခံယူထားခြင်းခံရတဲ့ လင်းလင်း နဲ့ ထက် - Yangon Media Group
ဒီတစ်ပတ် 8days ရဲ့ Cover Star ကိုတော့ ပရိသတ်တွေအမြင် မှာ ဆန်းစေမယ့်အပြင် 8days Cover မှာ တစ်ခါမှဖော်ပြခြင်းမျိုး မရှိသေးတဲ့ မိတ်ကပ်ပညာရှင် Shemale နှစ်ယောက်ကို ရွေးချယ် ခဲ့ပါတယ်။ မိတ်ကပ်ပညာလောက မှာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားရုံသာမက ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ကို ခံယူထားခြင်းခံရတဲ့ လင်းလင်း (Make up Artist) နဲ့ ထက် (Pop Soul) တို့ကတော့ နှစ်သစ်ကူးခါနီး အခါသမယမှာ အမြင်သစ်တစ်မျိုးနဲ့ တွေ့မြင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လင်းလင်း(Make up Artist)၊ ထက်(Pop Soul)၊ ဓာတ်ပုံ -Jason (Sense Photography)၊ မိတ်ကပ် – My Self၊ ဝတ်စုံ – မပုံ့(My Favourite), Waw Bi Lay (Style Secret Season3 Winner)၊ Location – Lotte Hotel
Q. ခွဲစိတ်ပြုပြင်ရတာကို ကြိုက်တဲ့သူထဲမှာပါတယ်လို့ ပြော လို့ရလား။
ထက် – ဟုတ် ပြောလို့ရပါ တယ်။ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ရတာကို ကြိုက် တဲ့သူထဲမှာ ပါပါတယ်။
လင်း – လင်းက ဓားမြင်ရင် ကြောက်တဲ့သူဆိုတော့ ခွဲစိတ်ပြုပြင် ရတာကို မကြိုက်ပါဘူး။ သဘာဝက ပေးတဲ့ အတိတ်ဝဋ်ြေ<ွကးကံကပါလာ ပြီးသားဆိုတော့ ပေးဆပ်ရမယ့် အရာတစ်ခုကို ကျေကျေနပ်နပ်ခံယူ ဖို့ သတ္တိရှိပါတယ်။ ဒါကို လွန်ဆန် ပြီး ခွဲစိတ်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်စဉ်း စားရမယ်။
Q. မိန်းမလျာတစ်ယောက် အတွက် ခွဲစိတ်ပြုပြင်တာနဲ့ အလှ တရားတိုက်ရိုက်အချိုးကျတယ်လို့ ထင်လား။
ထက် – တစ်ယောက်နဲ့တစ် ယောက် စိတ်ခံစားချက်အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ခွဲ စိတ်လိုက်ရလို့ ယုံကြည်ချက်ပိုရှိသွား တာမျိုးလည်းရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် လည်း ခွဲစိတ်တာမျိုးလုပ်တယ်။ သူ များအတွက်တော့မသိဘူး။ ကိုယ့် အတွက်တော့ ခွဲစိတ်လိုက်ရင် ယုံ ကြည်ချက်ပိုရှိစေတယ်။
လင်း – သူများတော့မသိဘူး။ လင်းကတော့ မယုံကြည်ဘူး။ မိန်းမ လျာတစ်ယောက်ဆိုတာ ရဲရင့်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်။ နူးညံ့တဲ့နှလုံးသား ကို ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မိန်းမလျာဖြစ်လာပြီဆိုကတည်းကို က စိတ်အားငယ်တာမျိုး၊ သိမ်ငယ် တာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး။ မိန်းမလျာ ဆိုတာ လူသားထဲကလူသားဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ကိုယ်တတ်ကျွမ်းတဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ အောင်မြင်အောင် လုပ်မယ်ဆိုရင် လူတိုင်းအသိအမှတ် ပြုခြင်းခံရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Q. ခွဲစိတ်ပြုပြင်ချင်တဲ့အစိတ် အပိုင်းတွေရှိသေးလား။
ထက် – ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ တော်ပါပြီ။
လင်း – နှာခေါင်းပြင်ချင်တယ်။ လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဆီလီကွန် လောက်ပဲ ထည့်ဖြစ်မှာပါ။ှSex ချိန်း ဖို့ဆိုတာကတော့ မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ Sex ချိန်းလိုက်ပြီဆိုကတည်းကိုက ကိုယ့်အတွက် အရာရာအားလုံးက ဆိုးကျိုးများပါတယ်။ ဘာမှထူးခြား လာမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ အပင်ပန်း ခံ၊ အနာခံပြီးတော့ မလုပ်တော့ဘူး။
Q. လိင်အင်္ဂါပြောင်းလိုက်ရင် ရော မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီ လို့ ပြောလို့ရလား။
ထက် – အဲဒီလိုမျိုး သုံးသပ်လို့ မရဘူး။ နဂိုကတည်းက ကိုယ့်ဘဝ အစစ်အမှန်ကို မေ့ဖျောက်လို့မရ ဘူး။ မေ့ဖျောက်လိုက်ရင် ပြဿနာ တွေ အများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ့်ဘဝအစစ် အမှန်ကို မေ့ဖျောက်ထားတဲ့သူတွေ မှမဟုတ်တာ။ အဲဒီအတွက် ကိုယ် တိုင်ကလည်း မေ့ဖျောက်ပြီး လုံးလုံး လျားလျား မိန်းမပါလို့ လိုက်ပြော နေလို့မှမဖြစ်တာ။
Q. လိင်အင်္ဂါပြောင်းခြင်း၊ မပြောင်းခြင်းက မိန်းမလျာတစ် ယောက်အတွက် ဘာတွေပြောင်းလဲ သွားမယ်လို့ထင်လဲ။
ထက် – ကိုယ့်တစ်ယောက် တည်းအမြင်ဆိုရင်တော့ ယုံကြည် ချက်ရှိချင်လို့ပါ။ ကြိုက်လို့လုပ်တယ်။ ဒါကိုလုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချ ထားတယ်။ အရင်ကတည်းကလည်း တွေးထားတယ်။ အရွယ်ရောက်လာ လို့ လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ လုပ်လိုက် တယ်။
လင်း- လိင်အင်္ဂါပြောင်းခြင်း၊ မပြောင်းခြင်းက မိန်းမလျာတစ် ယောက်အတွက် ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ အင်္ဂါပြောင်းလိုက်လို့လည်း မိန်းမ စစ်စစ် ဖြစ်မသွားဘူး။ မှတ်ပုံတင်မှာ ‘မ’ဖြစ်သွားမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ လူ တွေကလည်း မိန်းမလျာတစ် ယောက်လို့ပဲ မြင်မှာဆိုတေှာ့နထ ချိန်းလည်း ချိန်းတာပဲ ရှိမှာပါ။ မိန်း မတစ်ယောက်ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ပါ ဘူး။ မိန်းမလျာတစ်ယောက်ကို နှစ် သက်တဲ့အမျိုးသားတွေဆိုတာက လည်း မိန်းမလျာကိုပဲ နှစ်သက်တာ ပါ။ှနထ ချိန်းလိုက်ပြီဆိုကတည်းကို က ဒီမိန်းမလျာကို ဘယ်နှစ်သက် တော့မလဲ။ မိန်းမအစစ်ကိုပဲ သူယူ တော့မှာပေါ့။ ဒါကတော့ လင်းရဲ့ အမြင်ခံယူချက်ပါ။ှနထ ချိန်းလိုက်ပြီ ဆိုရင် ပုံမှန်ထက် အလုပ်ရှုပ်သွားပြီ။ လင်းတို့ Make up Artist တွေဆို တာက သူများကို အချိန်ပေးနေရတဲ့ သူတွေဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက်ရပြီး အချိန်ပေး ဆေး သောက်ရတာတွေလည်းရှိတော့ ဒီဒဏ်တွေကို မခံနိုင်ဘူး။
Q. လက်ရှိမှာရော ချစ်သူရှိ လား။
ထက် – ရှိပါတယ်။
လင်း – လင်းက ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်ပဲချစ်တယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကကြိုက်ခဲ့တဲ့သူ၊ ကြိုက်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးတွေရှိတယ်။ သူတို့ကတော့ မကြိုက်ဘူး။ မိန်းမ လျာတစ်ယောက်ကို တကယ်တွဲရဲတဲ့ ယောက်ျား တော်တော်ရှားပါတယ်။ သဲတစ်ဆုပ်ယူလိုက်ရင်တောင် သဲ တစ်ဆုပ်ထဲက သဲအမည်းလေးတစ် စေ့လောက် ရှားတယ်လို့ မြင်ပါ တယ်။
Q. ကိုယ့်ချစ်သူဆိုတာကို ဘယ်လိုစံနှုန်းတွေနဲ့ သတ်မှတ်ထား လဲ။
ထက် – ရည်းစားထားတယ် ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုအားကိုးတဲ့သူထက် ကိုယ်က အားကိုးရတဲ့သူမျိုးပဲဖြစ်ချင် တယ်။ အိမ်မှာ၊ အလုပ်မှာ ကိုယ်က ဦးဆောင်ပြီးသွားရတဲ့အချိန်တွေရှိ တယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ ကိုယ့်ကို ဦးဆောင်တဲ့သူမျိုးကို လိုချင်တယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ကလေးဆန်တဲ့ သူမျိုးထက်စာရင် ကိုယ့်ကို ဦးစီး ဦးဆောင်ရှိတဲ့သူမျိုးကို သဘောကျ တယ်။ အဲဒီတစ်ချက်နဲ့တင် ကိုယ့် အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။
လင်း – လင်းက ကုလားဆင် လေးတွေကြိုက်တော့ ဘောလိဝုဒ် ကားတွေ၊ အီတာလျံကားတွေ ကြည့်ရင် အဲဒီထဲကမင်းသားတွေက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အဆင်တွေပေါ့။ တစ်ခါတလေ ကိုယ်အလုပ်အားတဲ့ အချိန် ရင်ခုန်မိတာပေါ့။
Q. ချစ်သူက အနုပညာလော ကထဲကလား၊ အပြင်လောကထဲက လား။
ထက် – အပြင်ကပါပဲ။
Q. မိန်းမလျာတွေက အချစ် ရေးကံမကောင်းဘူးလို့ ပြောကြ တော့ ကိုယ့်ချစ်သူက တစ်ချိန်ချိန် မှာ ကိုယ့်ကို သစ္စာဖောက်သွားမှာ မျိုးကို စိုးရိမ်မိလား။
ထက် – သစ္စာပဲဖောက် ဖောက်၊ ထားပဲသွားသွား ဘာမှ သိပ် ပြီးခံစားချက်မရှိဘူး။ အသည်းကွဲရင် ကွဲမယ်၊ ငိုချင်ငိုမယ်။ ထားခဲ့လို့၊ သစ္စာဖောက်လို့ဆိုပြီး သေသွားမှာ လည်းမဟုတ်ဘူး။ တစ်ချိန်မှာ အား လုံးက ခွဲကြရမှာပဲ။ ထူးထွေပြီး Feeling မထားဘူး။ ပိုဆိုးတာက မိန်းမလျာတွေကို လက်ခံနိုင်မယ့်သူ နည်းတယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေကလည်း နည်းတယ်။ သာမန်ယောက်ျား မိန်းမတောင် ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းလာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ကိုယ့်အတွက်က ပိုပြီး နည်းပါးတဲ့အတွက်ကြောင့် Feeling မထားထားဘူး။
Q. အသည်း ဘယ်နှခါကွဲဖူး လဲ။
ထက် – နှစ်ခါလောက် ကွဲဖူး တယ်။
လင်း – အသည်းတော့ မကွဲ ဖူးဘူး။ သူ့ရှေ့ကနေ ဖြတ်ဖြတ် လျှောက်ပြီး သူ့အနားသွားနေရရင် ကျေနပ်နေတာဆိုတော့ အသည်း မကွဲတတ်ဘူး။ ယောက်ျားတစ် ယောက်အတွက်နဲ့ ကိုယ့်အလုပ် အပျက်ခံပြီး ထိုင်ငိုနေမယ့်အစား ကိုယ့်အလုပ်ကိုပဲ အကောင်းဆုံးလုပ် မယ်။
Q. အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ရည်ရွယ် ချက်ရှိလား။
ထက် – အဲဒီလောက်ထိ မစဉ်းစားထားဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို တော့ ယူဖို့အသိုင်းအဝိုင်းဝန်းကျင်က လက်ခံနိုင်ဖို့ အရမ်းခဲယဉ်းတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ နှစ် ယောက်တည်းပြီးသွားတဲ့ကိစ္စမဟုတ် ဘူး။ နှစ်ဖက်မိဘဆိုတာရှိတယ်။ ကိုယ့်အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေအရမ်း နည်းတဲ့အတွက် မမျှော်လင့်ထား ဘူး။
လင်း – သူများကိုပြောရင် တော့ ရယ်ကြမှာပါ။ လင်းတို့ မှတ် ပုံတင်တွေ၊ ပတ်စပို့တွေထဲမှာ ရေး ရင် Male ပဲ ရေးရတာပါ။ ယောက်ျားချင်းယူတယ်ဆိုတာ နိုင် ငံခြားမှာတော့ရှိပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ တော့ ဖိတ်စာနဲ့ အကျယ်တဝင့် ဆောင်တာမျိုးတော့ အခုချိန်ထိ မမြင်ဖူးဘူး။ သူများတွေကြားရင် ရယ်စရာကြီးဖြစ်နေမယ်လို့ ထင်ပါ တယ်။ မိန်းမလျာကို ချစ်တတ်တဲ့သူ ရှိတယ်၊ အပြစ်ပြောတဲ့သူရှိတယ်။
Q. 8days Cover ရိုက်ရတဲ့ ခံစားချက်….
ထက် – အဓိကတော့ စီစဉ်သူ မိတ်ကပ်လင်းလင်းပါ။ သူ့ရဲ့စီစဉ်မှု တွေအောက်မှာ တောက်လျှောက် လိုက်လုပ်နေတာပါ။ လင်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက် ပေးတဲ့ Jason၊ 8days ဝိုင်းတော် သားတစ်ဖွဲ့လုံးကိုလည်း ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။
လင်း – Cover ရိုက်တာ ဒါ ပထမဦးဆုံးပါ။ မဂ္ဂဇင်းတွေအတွက် တော့ အတွင်းတွေရိုက်ဖူးတယ်။ Lotte ကလည်း မိသားစုလိုမျိုး ပံ့ပိုး ပေးတယ်။ Jason ကလည်း စိတ် ရှည်လက်ရှည် ရိုက်ပေးတယ်။ ဝတ် စုံဆိုရင်လည်း ဒီဇိုင်နာ မပုံ့နဲ Waw Bi Lay က အကောင်းဆုံး ဖန်တီး ပေးထားပါတယ်။ ကိုဇင်အောင်က တစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ 8days ကလည်း လင်းတို့ မိန်းမလျာလော ကကြီးကို အားလုံးရှေ့မှာ သတ္တိရှိရှိနဲ့ ချပြရဲတဲ့အတွက်ကြောင့် 8days Journal ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါ တယ်။
တူရကီအစိုးရက နှစ်သစ်ကာလ တိုက်ခိုက်မှုကို ကြံစည်နေသော အိုင်အက်စ် အဆက်အသွယ် သံသယရှိသူ ၁၂ ဦးက?
ပွင့်လင်းရာသီ ရောက်လာပြီဖြစ်၍ မင်းဘူးခရိုင်အတွင်း၌ ကျောက်မီးသွေး တူးဖော်ရန် ဒေသခံတချို့ လ
ဦးကိုနီအမှုကို ရုံးထုတ်စဉ် ‘မင်းတို့ ထမင်းဝအောင် စားထား’ စာတန်းပါ အင်္ကျီ ဝတ်ဆင်လာသူ လေးဦးက သေ?
Sai Sai Mandalay Show မေ ၂၅ ရက်တွင် ပြုလုပ်မည်